Ubuntu 21.04 (Hirsute Hippo): Wayland nekutadza? | Linux Vakapindwa muropa
Sezvamunongoziva imi, migove mizhinji yakatorera iyo Wayland graphical protocol kutsiva yekare X. Asi mamwe acho akaramba, kana kutora nhanho kumashure ndokudzokera kuX, sezvazviri naUbuntu. Asi, zvinoita sekunge isingasviki mwedzi miviri iyo iyo itsva vhezheni Ubuntu 21.04 izvo zvinogona kuchinja zvese, nekuti ichaedza naWayland.
Ubuntu 21.04 Hirsute Hippo ichauya yakatakura zvinhu zvitsva, kuitira kuti ugone kuzvigadzirisa zvese nekuzvipuruzira kuti vagadzire iro rakadzikama zvishoma distro panosvika LTS. Naizvozvo, inguva yakakodzera kuti dzoka Wayland zvakare uye ona kana yatogara kana kuti kana vakaibvisa zvakare mune imwe vhezheni yemberi yeCanonical distro. Mukutaura, zvaizouya kuzogara ...
Wayland yatove iripo, uye zvakare iro ramangwana reLinux desktop, kusiya kumashure X yekare.Naizvozvo, Ubuntu 21.04 yaizotevera tsoka dzaFedora, CentOS uye RHEL 8, iyo yakagadzirirwa Wayland mune yayo GNOME vhezheni.
Muchiitiko cheUbuntu, pakanga paine kuyedza makore mana apfuura, kungosiya graphical Unity shell kuti idzokere kuGNOME yakachena. Asi chokwadi ndechekuti hazvina kufamba zvakanaka uye mukati Ubuntu 18.04 LTS yakadzoserwa kumisangano yeX.Org. Uye chakanyanya kudzikisira ndiko kutakurika kwesoftware, nekuti inoda kugadziridzwa kuti ishande pairi.
Ichokwadi kuti Wayland yaive imwe sarudzo kune avo vashandisi vaiida, asi kwete a default kusarudza sezvaitarisirwa kuve paUbuntu 21.04. Kunyangwe isiri yemakadhi ese emifananidzo uye yeGNOME chete, mamwe maratidziro achafanirwa kuzoonekwa gare gare ...
Sebastien Bacher, mumwe wevanogadzira iyi distro, akavimbisa kuti «MuUbuntu 17.10 kutenderera isu takaedza Wayland seye default chikamu, asi isu hatina kunzwa chokwadi panguva yacho kuti yaive yakagadzirira LTS. […] Isu tinofunga ikozvino inguva yakakodzera yekuyedza zvakare, iwe unofanirwa kutipa nguva yakakwana pamberi peiyo LTS inotevera kuti uwane mhinduro kwayo uye gadzirisa nyaya. […] Vashandisi veNVIDIA vacharamba vachishandisa Xorg nekukasira izvozvi, asi tinotarisira kuti mamiriro acho achagadziriswa pamberi peLTS.".
Recuerda, que NVIDIA nderimwe rematambudziko makuru yekutora Wayland.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Ubuntu 21.04 (Hirsute Hippo): Wayland nekutadza?
RV64X, yakavhurika sosi GPU inoenderana neRISC-V matekinoroji